Kolontsaina Indiana sy ny fomban-drazany | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | kolontsaina, gastronomy, India, Fitsangatsanganana any Azia
Ny kolotsaina indiana dia fantatra erak'izao tontolo izao ho iray amin'ny kolontsaina mamiratra indrindra sy mystika izay misy ankehitriny, ity fomba fiteny asiana mahatalanjona ity dia vokatry ny fampifangaroana mampihetsi-po sy fampidirana amina singa samihafa. Izy io dia fifangaroana ara-kolontsaina tsara izay nitaona fironana avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, namorona dinika ara-kolontsaina heterogenika lehibe, izay hita taratra amin'ny lafiny manomboka amin'ny fivavahana ka hatramin'ny maritrano, zavakanto, gastronomie na fomba amam-panao. Ny fahamaroany dia nahatonga azy ho lasa iray amin'ireo firenena mahaliana indrindra eto an-tany, ary toerana fitsangantsanganana tena tsara ho an'ireo mpandeha manerana an'izao tontolo izao.
Ity kolontsaina hindoa ity dia nanolotra fomban-drazana nandritra ny an'arivony taona, izay miverina mankany amin'ny Rig-Veda, lahatsoratra tranainy indrindra any India, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK Taorian'ny fanafihan'ny Silamo sy ny fanjakan'ny firenena Tandrefana nanerana an'i India, dia nisy fiantraikany tamin'ny kolontsaina isan-karazany izany, fa mitazona ny fotony sy ny fomban-drazana. Tsy azo atao ny milaza ny fomba amam-panao sy ny kolotsaina an'arivony taona maro tao anaty lahatsoratra iray, fa hiezaka izahay hamorona fomba fijery mivelatra amin'ny kolontsaina Indiana sy izay mahasarika antsika amin'izany.
1 Tantara kely an'i India
2 Ny rafitry ny kolontsaina Indiana
3 Fivavahana any India
4 Mozika sy dihy amin'ny kolotsaina hindoa
5 Gastronomy ny kolotsaina Indiana
Tantara kely an'i India
Ny tantaran'ny India taloha dia mizara ho Vanim-potoana Veda sy vanim-potoana Brahmanika. Ny voalohany dia ny tranainy indrindra tamin'ny taona 3000 talohan'i JK, raha nanana kolontsaina mandroso ny sivilizasiona Dravidian, miaraka amin'ny indostrian'ny alimo, ny fambolena ary ny vondrom-piarahamonina kely, ho fanampin'ny fivavahana polytheistic. Ny vanim-potoana Brahmanic dia tonga rehefa nanjakazaka tamin'ny faritany namorona fanjakana kely ny Brahmins, kaheba avy amin'ny faritry ny Ranomasina Caspian. Saingy, taorian'ny fanapahana sy fanapahana fanapahana tena lehibe nataon'izy ireo dia nikomy ny vahoaka ary niteraka ny Buddhism.
La tantara farany indrindra miresaka fanafihana ny kolontsaina isan-karazany, manomboka amin'ny Persia ka hatramin'ny Arabo, Portiogey na anglisy. Famintinana lehibe dia lehibe izy io, saingy manome antsika ny hevitry ny fitaomana rehetra izay voarain'ity kolontsaina indianina lalim-paka ity nandritra ny tantara.
Ny rafitry ny kolontsaina Indiana
Ity rafitra stratifikasi ara-tsosialy ity avy mivantana amin'ny Hindoisma, ny fivavahana lehibe any India. Mampianatra antsika izy io fa ny olona dia noforonina avy amin'ny faritra samihafa amin'ny tenan'i Brahma andriamanitra, ka namorona ireo caste efatra nanjakan'izy ireo nandritra ny taonjato maro.
Avy amin'ny vavan'ilay andriamanitra Brahma no nivoahan'ny Brahmans, vondrona mahery indrindra, pretra. Ny chatria dia mpiady ambony, nipoitra avy amin'ny sandrin'andriamanitra. Ny Vaisías dia ny mpivarotra sy ny tantsaha, izay nivoaka avy amin'ny feny andriamanitra, ary ny sudra na ny mpanompo dia ny caste ambany indrindra, izay nivoaka tamin'ny tongotr'andriamanitra. Ankoatr'ireny dia ireo tsy azo kitihina, izay heverina fa noroahina, ary tsy anisan'ny caste na fiaraha-monina, satria ny asa farany ambany ihany no azon'izy ireo atao, toy ny fanangonana taim-biby. Amin'izao fotoana izao, voafehy ara-dalàna ny kasta, saingy voatazona izy ireo noho ny fampiasana sy ny fomba amam-panao ary ny fakan'izy ireo lalina eo amin'ny fiarahamonina.
Ny fivavahana dia ampahany manandanja amin'ny kolotsaina indiana, ary ankehitriny dia misy fivavahana efatra misy fiaviana Indiana na Dharmic. Ny Hindoisma no fivavahana malaza indrindra, ary ny fahatelo lehibe indrindra manerantany. Ao anatiny dia misy sekoly sy fomba amam-panao maro samihafa, ary ny fivavahana manaraka ny fomban-drazana. Ny andriamanitra lehibe ao dia Rama, Shivá, Visnú, Krisná ary Kali.
Etsy ankilany dia misy ny bodisma, ny fahadimy manandanja indrindra eran'izao tontolo izao, natsangan'i Sidarta Gautama, zanakalahin'ny Raja amin'ny fanjakan'ny Sakias, izay nandao ny zava-drehetra ary tonga mpangataka, niantso ny tenany ho Buddha, izay midika hoe ilay nahazo hazavana. Miorina amin'ny fampiharana ny tsara, fiantrana, fitiavana ary hatsaran-toetra hafa izany ary tsy teolojia. Misy ihany koa ny Yainism, mitovy amin'ny Buddhism, sy ny Sikhism, fivavahana iray monotheistic eo anelanelan'ny elanelana sy hindoisma.
Mozika sy dihy amin'ny kolotsaina hindoa
Ny fanehoana ny mozika koa dia fifangaroan'ny feo folk sy classical, izay nitarika ny famoronana dihy hafakely sy mahazatra an'ny firenena. Na izany aza, Misy dihy Hindoa 8 izay voasokajy ho kilasika, ary natsofoka tao amin'ny rafi-pampianarana nentim-paharazana noho ny satan'izy ireo ho toy ny fomba fiteny nentim-paharazana Hindoa. Ampianarina ao amin'ny Akademia Nasionalin'ny mozika, dihy ary tantara an-tsehatra malaza izy io, ary ao anatin'izany ny dihin'ny: bharatanatyam, kathak, kathakali, mohinyattam, kuchipudi, Manipuri, odissi y sattriya. Ireo dia dihy misy endrika fitantarana tsy manam-paharoa izay misy koa singa ara-angano tsy mampino, tsy afaka mandeha any India ianao raha tsy mahita ny iray amin'ireo fampisehoana mahafinaritra ireo.
Misy ihany koa ny mozika folk izay mbola milalao any amin'ny faritra sasany amin'ny firenena. Misy ny Bauls any Bengal, ny mozika Bhangra any avaratra na ny Quawwali ao amin'ny Pujab.
Gastronomy ny kolotsaina Indiana
Ny fihinanana eto dia zava-mahadomelina ho an'ny lanilany. Fantatra amin'ny sakafo matsiro ny sakafo indianina ary amin'ny fampiasana zava-manitra isan-karazany, mifototra amin'ny vary sy katsaka hatrany. Maro amin'ireo zava-manitra isan-karazany nohaninay ankehitriny, toy ny dipoavatra mainty, no niavian'ity, ka manana fahaiza-mitantana hafakely ny Hindou. Na izany aza, ity sakafo ity dia mety hampidi-doza kely ho an'ireo mararin'ny allergy, ny fananana sakafo masiaka toy izany, mihoatra ny olona iray no mety ho sahirana.
Misy lovia mahazatra izay tsy tokony hatsahatrao ny manandrana raha vantany vao mankany India ianao, satria ampahany lehibe amin'ny kolontsain'ny firenena tsirairay avy ny gastronomie. Tandoori akoho dia lovia akoho natsatsika voahosotra amin'ny yaourt ary miharo zava-manitra tandoori. Misy ihany koa lovia hafa mety ho fantatrao, toy ny biryani, izay vary mifangaro zava-manitra, satria tsy tokony hadinontsika fa zava-dehibe tokoa ny zava-manitra amin'ny sakafo indianina. Ny pizza pizza na uthathaappam dia foton'ny koba vita amin'ny lafarinina lentil sy lafarinam-bary miaraka amin'ny legioma sy akora hafa, mitovy amin'ny pizza mahazatra. Ao amin'ny fizarana vatomamy dia manana jalebi ianao, koba mamy voaroboka amin'ny syrup, miaraka amin'ny loko volomboasary mampiavaka azy sy ny endrik'ilay kofehy mihorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Kolontsaina Hindo
yopi dia hoy izy:
Raha ny fahitana azy dia somary fohy ihany aho saingy fampahalalana tsara ary ny antony nahatonga ahy nanokatra ny pejy dia satria mila an'ity fampahalalana ity loatra aho ary hitako fa tena mahaliana
Mamaly an'i yopi
FcBarcelona24 dia hoy izy:
Mila manamboatra tsilo ishikawa amin'ny kolontsaina hindoa aho izao no tena manandrana indrindra 🙂
Valiny amin'ny FcBarcelona24
Jacqueline jimenez dia hoy izy:
Heveriko fa fampahalalana fohy sy fintina izany fa ambonin'izany rehetra izany dia manazava anao tsara ary izany no zava-dehibe satria raha mitsidika pejy hafa ianao dia hamelabelatra be momba ilay lohahevitra ary amin'ny farany dia tsy azonao ilay izy ka toa tsara be amiko dia nanampy ahy hahafantatra bebe kokoa izany
Valiny tamin'i Jacqueline Jimenez
Tatiana yulli Duque dia hoy izy:
Te-hahafantatra aho hoe inona ny dikan'ny akanjon'izy ireo, indrindra amin'ny vehivavy noho ny firavaka kanto sy ny endrik'izy ireo toy ny andriamanibavy
Mamaly an'i yulli tatiana duque
Daniela miralles dia hoy izy:
Tena Kristiana aho ary tsy tafintohina mihitsy. fa tsy Andriamanitra tokana ve no eo foana? (Amin'ny fivavahana rehetra na saika ny rehetra, naheno tamin'ny fanadihadiana momba an'i India aza aho fa na dia manana andriamanitra maro ho azy ireo aza izy ireo dia samy manana ny talentany na ny toetrany saingy ny herin'ny Andriamanitra tokana no ao anatiny. Ary koa amin'ny Buddhism na dia tsy teolojia aza dia marina, Buddha indray mandeha dia nilaza fa nahatsapa hazavana be izy ka nahatsapa na niaina ny fanatrehan'Andriamanitra). Ankoatr'izay, ny fivavahana rehetra sy ny toa azy dia mitady antsika ho olona tsara, raha fintinina, izy rehetra dia mitarika antsika amin'izany. Tsy hitako ny sisintany, tsy fantatro ny momba anao. mpirahalahy daholo isika.
Tsy te-hanohy amin'ny resaka ara-pivavahana aho fa taty aoriana dia nieritreritra aho fa ny fomba fahitako zavatra dia mety hanampy olona iray, tsy te-hanafintohina foana.
misaotra tamin'ilay lahatsoratra, nanome topy maso tsara ahy momba ny toa an'iza i India.
Valiny tamin'i Daniela Miralles
Marina tokoa i Las Torres del silencio izay boky mahafinaritra.
Fialan-tsasatry ny masoandro any Barbados